Homepage Slide Archives - Page 38 of 38 - अभियान खबर
सरकारविरुद्ध कांग्रेस ले ७७ जिल्ला मै सडक आन्दोलन गर्ने
१ साउन, काठमाडौं । सरकारको कामकारबाही प्रति बिरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष्य दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्द्र कांग्रेसले साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार […]
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको निधन भएको छ । दुई साता यता काठमाण्डांको धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत सुब्बाको निमोनियाका कारण मृत्यु भएको हो । उहाँको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको थियो । उहाँ लामो समयदेखि मृर्गौला रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । तीन बर्षअघि दुबै मृगौला फेल भएपछि एउटा मृगौला भारतको अस्पतालमा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । सुब्बा […]
विश्वकप : कुन टिमको प्रदर्शन कस्तो?
काठमाडौं– २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आइतबार सकिएको छ। आइतबार भएको फाइनल भिडन्तमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ गोलले पराजित गर्दै दोस्रोपटक उपाधि जित्यो। रसियाका विभिन्न ११ शहरका १२ वटा रंगशालामा ६४ वटा खेल संचालन भएका थिए। एक महिना चलेको प्रतियोगितामा ३२ टिमका कुल ७ सय ३६ खेलाडी रसिया पुगेका थिए। खेलमा ६३ खेलमा गोल हुँदा समूह चरणमा फ्रान्स […]
कांग्रेस परीवर्तन कसरि ?
काठमाडौँ । इतिहास मै सबैभन्दा कमजोर अवस्था मा पुगेको नेपालको पुरानो लोकप्रिय पार्टि नेपालि कांगेस यतीबेला पुनर्संरचना को चर्चा र परिचर्चा हुन् थालेको छ । अब नेपाली कांग्रेस कसरि परिवर्तन सम्भब छ त ? नेपालि कांगेस मा बिगत लामो समय देखि निरन्तर लागेका युवा ब्यबसायी राजिव श्रेष्ठ संग कुराकानी ; युवाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र […]
असार ९ गते देखी बेपत्ता पोखरा महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका वरिष्ठ सुचना अधिकृत ओमराज पौडेल शनिबार विहान तनुहँको भिमादको सेती नदिकिनारमा सव फेला परेको छ । उनी हराएको २२ दिन पछि भिमानबाट सव फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनको सवलाई आफ्न्तले पहिचान गरे पछि प्रहरीले मुचुल्का उठाउन थालेको छ । मुचुल्का गरे पछि उनको […]